पूर्वपत्नी इशालाई ध*म्की र अनलाइन खबरका सम्पादकलाई चे*तावनी दिँदै रवि लामिछानेले लेखे यस्तो स्टाटस – सुदूरखबर डटकम
पूर्वपत्नी इशालाई ध*म्की र अनलाइन खबरका सम्पादकलाई चे*तावनी दिँदै रवि लामिछानेले लेखे यस्तो स्टाटस
label समाचार प्रकाशक query_builder September, 01 2019
भर्खरै प्रहरी हिरा सतवाट अदालतको आदेशले धरौटी वुझाएर रिहा मएका चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेका अझै पनि दुखका दिन गएका छैनन् । हिरा सतवाट रिहा भए लगत्तै उनी विरुद्ध दुई पटक मुद्दा र उजुरी परिसकेको छ । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा रविकै मसला चलिरहेका छन् । समाचारमा पनि रवि नै जोडिएका छन् । यस्ता कृयाकलापवाट आजित भएका लामिछानेले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत लामो दुखेसो पोखेका छन् ।
उनले आफु अप्ठेरोमा परेको बेलामा पूर्वपत्नी इशालाई केही सञ्चार माध्यमले आफु बिरुद्ध प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । कसैले देशब्यापी मु द्दा हाल्ने र केहीले पुरानो सम्बन्ध उप्काएर आफुलाई त नाव दिएको बताएका छन् । अनलाइनखबरका सम्पादक अरुण बराल, पूर्वपत्नी इशाको नाम नै उल्लेख गरेर उनले आफुविरुद्ध नलाग्न चे तावनी दिएका छन् । जनआस्थाबाट बरालले पत्रकारिता सुरु गरेकै कारण गुरुलाई दक्षिणका रुपमा आफूलाई प्रयोग गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । उनले फेसबुकमार्फत गम्भीर आक्षेप लगाउँदै पूर्व पत्नी इशालाई आफु विरुद्ध प्रयोग नगर्न चेता वनी दिएका छन् । उनले पूर्व पत्नी इशालाई पनि आफ्ना विरुद्ध मिडियावाजी नगर्न चेता वनी दिएका छन् ।
लामिछानेले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको लागि दक्षिणका रुपमा बरालले आफूलाई प्रयोग गरेको आशयमा आरोप लगाएका छन्।एक जरुरी टिप्पणी भन्दै लामिछानेले लेखेका छन, ‘सम्पादक अरुण बरालजी, मलाई थाहा छ, तपाईं जनाआस्थाबाट पत्रकारिता गर्न शुरु गर्नुभएको ब्यक्ति हो । तपाइँको आदर्श जनआस्था होला र जनआस्थाका सम्पादक तपाइँका गुरु होलान । के तपाईंले मेरो करियर आफ्ना गुरुलाई गुरु दक्षिणा दिने बाचा नै गर्नु भएको हो र ? ’
यस्तो छ रविको फेसबुक स्टाटस
एक जरुरी टिप्पणी, अनलाइन खबर डटकम बारम्बार मेरो बितेको कुरा कोट्याउँछ । कहिले ४ वटा बिहे भन्छ, कहिले अमेरिकाको घरको पैसा दिएन भनेर लेख्छ । कहिले छोरीहरुलाई हेरेन भन्छ । न मसँग वास्तविकता सोध्छ । एकोहोरो आरोप छाप्छ । बितिसकेको जीवनबारे मैले आजिवन जवाफ दिएर बस्ने रु सम्पादक अरुण बरालजी, मलाई थाहा छ, तपाईं जनाआस्थाबाट पत्रकारिता गर्न शुरु गर्नुभएको ब्यक्ति हो । तपाइँको आदर्श जनआस्था होला र जनआस्थाका सम्पादक तपाइँका गुरु होलान । के तपाईंले मेरो करियर आफ्ना गुरुलाई गुरु दक्षिणा दिने बाचा नै गर्नु भएको हो र रु मैले ईशाजीलाई कति पैसा कसरी उपलब्ध गराएँ रु मैले दिएको पैसा घरको किस्ता तिर्न प्रयोग भयो कि अन्यत्र प्रयोग भयो भन्ने कुरा मलाई सोध्नुस न ।हिजो रातीसम्म पनि म मेरि छोरीसँग कुरा गरिरहेको छु ।
ईशाका दाइसँग २ हप्ता अघि भेटेकै छु । मेरो जिम्मेवारी मलाई थाहा छ, बहुत राम्ररी । भावनात्मक नाता हुनेले आफ्ना सन्तानका पिताको बारम्बार सार्वजनिक बेईज्जती गर्दैन । समस्या भए सल्लाहमा घरमै टुङ्गो लगाउछ । म हिरासतमा हुँदा ईशाजी केही पत्रकारहरुलाई मेरो विरुद्धमा घरको पैसाको नतिरेको, छोरीहरुलाई नहेरेको लगायतका सिकायत गर्न ब्यस्त हुनु हुन्थ्यो । आज फेरि किन रङ फेर्नु भएको हो ? उहाले थाहा छैन । सायद केही वाहवाहीको लोभ लागेर हुन सक्ला । ईशाजी हिजो पनि आफ्नै दुनियाँमा खुशी हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उहाँ अमेरिकामा आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहनु भएको छ ।अरुणजीको अनलाइन खबरले आज अमेरिकाको घरको पैसा तिरेन भनेर समाचार लेखेछ, पहिला पनि चौथो सम्बन्ध भनेर हेडलाईन बनाएको थियो । कस्को कति वटा सम्बन्ध भनेर गन्ने इक्छा भए मलाई भेट्नु होला सम्पादकज्यू । जिब्रो टोकेर फर्किनु हुनेछ । कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । अब यही खबरमा थप मसला हालेर नागरिकको शुक्रवार भन्नेले लेख्छ ।
त्यसपछि उहाँहरुको नेटवोर्कका सारा अनलाइनमा जान्छ । यति धेरै किन पछि लाग्नु हुन्छ ? तपाईको सम्पादकीय क्षमता मेरा विरुद्ध नै खर्चने हो आजीवन रु अब यस्को जवाफ कति कुशलताका साथ लेख्नु हुन्छ होला । अनि यति भनेकोमा मैले कुन आपत बेहोर्नु पर्ने हो, त्यो थाहा छैन ।कस्को कति वटा सम्बन्ध भनेर गन्ने इक्छा भए मलाई भेट्नु होला सम्पादकज्यू । जिब्रो टोकेर फर्किनु हुनेछ । कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैनअर्को कुरा,भावनात्मक नाता नमरेको भए आफ्ना सन्तानका बाबू हिरासतबाट छुट्ना साथ केहीले उचाल्दैमा बदनाम गराउनु पर्ने के हतारो आइलाग्यो ईशाजीलाई रु के यी सब कुराका लागि उपयुक्त मौका यही थियो रु मैले गलत गरे कानुन छैन ? छोरीहरुको अधिकार समेत उहाँ आफैले लिन खोज्नु भएकोले सो अधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी बाटोको खोजी भैरहेको मात्र हो, जुन कुरा उहाँलाई, उहाँका दाईलाई र मेरा छोरीहरुलाई थाहा छ । कानुनी रुपम टुङ्गो लागेको सम्बन्धलाई पटक पटक उचालेर आफ्ना गुरु खुशी पार्ने काम बन्द गर्नुस अरुण बरालजी ।
कार्यक्रम निर्माणमा गल्ती भए, कन्टेन्टमा कुरा गरौं । पारपाचुके भैसकेकी महिलालाई उचाल्न बन्द गरौं र महिलाले पनि मिडियाबाजी बन्द गरौं । वास्तविकता त्यो होइन, जुन भनियो र लेखियो । हैरान गर्ने पनि सिमा हुन्छ ।कोही देशभरी मुद्धा हाल्ने अभियानमा लाग्ने, कोही पुराना कुरा उचाल्ने ११ सरहरुको अरु काम छैन होला, तर प्लिज मलाई यति धेरै दुःख नदिनुस । हामी सबै आ–आफ्नो संसारमा खुशी छौं । ईशाजी अमेरिकामा खुशी साथ बसिरहनु भएको छ, म आफ्नो नयाँ जिवनमा खुशी छु । छोरीहरुसँग प्रायः हरेक दिन कुरा हुन्छ । तपाईंलाई चाहिँ अब के चाहियो रु म आजबाट कार्यक्रम शुरु गर्दैछु । त्यसमा चाहिँ केही भए लेख्नु होला । नत्र पुराना र टुंगो लागेका मुद्दा उठाएर कायरताको उदाहरण नदेखाउनु होला । यो अपिल ईशाजी, अरुणजी लगायतका जीहरुलाई । धन्यवाद ।